Jamal Musiala Oo Diirada U Saaran Liverpool, Manchester United Iyo Manchester City
Home Horyaalka Germalka Jamal Musiala oo diirada u saaran Liverpool, Manchester United iyo Manchester City
Jamal Musiala ayaa ka soo muuqday bartilmaameed kooxaha waa weyn ee Premier League ee Liverpool , Manchester United iyo Manchester City ka dib markii uu ku guuldareystay inuu heshiis cusub la gaaro Bayern Munich .
17 jirkaan khadka dhexe ee weerarka ka ciyaara ayaa dhamaadka xilli ciyaareedkii hore, noqday ciyaaryahanka ugu da’da yar Bayern iyo gooldhaliyaha Bundesliga.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee xulka England ee da’doodu ka hooseyso 21-sano Musiala ayaa 19 kulan u saftay kooxda Bavaria guud ahaan, laakiin qandaraaskiisa haatan wuxuu dhacayaa sannadka soo socda, heshiis cusubna weli lama aqbalin.
Goal ayaa tabineysa in, iyadoo Bayern aysan dooneynin inay la jaanqaado mushaharka young 100,000 ee uu isbuucii mushahar ahaan u qaato, inuu xagaaga ku sii jeedo Premier League.
Kooxda heysata horyaalnimada Ingariiska ee Liverpool, oo ay weheliso kooxaha ay xafiiltamaan ee Manchester United iyo City, ayaa dhammaantood la sheegayaa inay si dhow ula socdaan xaaladda.
Previous articleArsenal oo joojisay qandaraaskii Sokratis Papastathopoulos
Next articleInter Milan oo xiiseyneysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Lucas Torreira